Taratasy ho an'ny afisy: inona avy ireo ary iza no tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | | loharanom-baovao
Amin'ny maha mpamolavola anao dia mila manana loharanom-pahalalana maro ianao mba hahafahanao manolotra tetik'asa amin'ny mpanjifanao amin'ny fomba fijery isan-karazany. Satria koa mila matetika karazana loharanom-pahalalana iray ianao na iray hafa miankina amin'ny tetikasa. Noho izany, ilaina ny fananana loharano isan-karazany. Na taratasy ho an'ny afisy, endritsoratra ho an'ny tantara an-tsoratra, endritsoratra ho an'ny lohateny ... dia mila miomana amin'ny zava-drehetra ianao.
Amin'ity tranga ity dia te-hifantoka amin'ny taratasy ho an'ny afisy izahay ary hiresaka aminao eto ambany momba ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo: ny fomba fisafidianana azy ireo, ny karazana litera tokony hofidinao, ary ny ohatra sasany amin'ireto fonosana ireto ho anao. famolavolana. Hanomboka ve isika?
1 Taratasy afisy - ity no tokony hotandremana
1.1 Ny toetra mampiavaka ny taratasim-panoratana
2 Fitaovana afisy: Taratasy azonao ampiasaina
2.1 Avant tena manavao
2.5 Fantra Alternative
2.7 FS Pink
2.8 Mahafatifaty taratasy
2.9 Taratasy afisy: Tsy azo atao
Taratasy afisy - ity no tokony hotandremana
Ny afisy dia tsy miorina amin'ny sary fotsiny. Mitondrà lahatsoratra vitsivitsy, na kely na malalaka. Noho izany, mba hanamafisana ny hafatra omena miaraka amin'ilay sary, zava-dehibe ny hisarihana ny sain'ny olona mamaky azy, izany hoe tsy ny sary fotsiny no hitany fa mamaky ny lahatsoratra sy ny andiany, toa anao ihany ny vokany.
Tsy mora tanterahina izany firindrana amin'ny peta-drindrina izany. Izay no mahatonga ny fotoana maharitra hahitana ny lakile. Ataovy ao an-tsaina fa misy karazana litera maro ho an'ny afisy, fa misy tena mampiavaka azy ary, ho fanampin'izany, ny tetikasa tsirairay dia mety ho tokana ary mila karazana endritsoratra marina.
Na eo aza ny afisy, ary amin'ny dokambarotra an-tsoratra amin'ny ankapobeny, tsy mandray intsony toy ny taona vitsivitsy lasa izay, orinasa maro no mbola miloka amin'izany mba hampiroborobo ny hetsika, vokatra, serivisy ... Ary manolotra fahitana lehibe ho an'ny marika, manome akaiky ny mpihaino kendrena izy ireo ary mahomby ihany koa (raha vita tsara).
Manana ohatra iray isika amin'izao fotoana izao ao amin'ny afisy Madrid momba ny tenisy. Ao anatiny, ao anaty taratasy lehibe, dia mivaky hoe "Any Madrid dia eo ankavanana isika", izay manisy firesahana, na tamin'ny voalohany izany no fijeriny, tamin'ny fifidianana May 2021, izay nandresen'ny elatra havanana Fa raha ny tena izy dia momba ny amboaran'i Davis ny afisy, ary amin'ny kely kokoa dia manaraka ny hafatra izy: «ary mihemotra. Niverina ny amboara Davis ».
Raha tsikaritrareo dia ilay lahatsoratra no mahasarika ny sain'ny olona ary ireo typefaces ho an'ny afisy ireo no tadiavinao. Ka tianao ve ny hanomezanay hevitra anao?
Ny toetra mampiavaka ny taratasim-panoratana
Alohan'ny hanomezana endritsoratra ho an'ny taratasy amin'ny paositera, mora kokoa ny hahafantaranao hoe inona ireo toetra tsy maintsy tanterahin'ireto. Ny iray amin'ireo voalohany dia ny fifidianana izay mety. Eny, izany dia handany fotoana, fa ny tsy fahombiazana dia afaka manary ny asanao rehetra, ary azo antoka fa tsy izany no tadiavinao.
Tsara fa, rehefa mampiasa endri-tsoratra, dia aza atambatra amin'ny endritsoratra hafa. Ny afisy dia toa tsara miaraka amina endritsoratra iray ihany, fa tsy miaraka amin'ny maro satria ny zavatra tokana hotratrarinao dia ny fanelingelenana ny mpamaky, raha tsy hoe io no tadiavinao.
Miankina amin'ny hafatra, ny mpihaino resahinao, ny tontolon'ny hafatra, sns. tsy maintsy misafidy litera iray na hafa ianao ho an'ny afisy. Nefa izy rehetra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny zava-misy fa mora vakina, na dia lavitra aza; tsy hampisavoritaka ny mpamaky izy (ohatra, satria tsy fantany na mametraka teny iray na hafa izy ireo); mifanaraka amin'ny hafatra izy ireo; nifanaraka tamin'ny haben'ny afisy (na ny habaka natokana ho an'ny lahatsoratra eo amboniny); ary misongadina ny zava-dehibe indrindra.
Fitaovana afisy: Taratasy azonao ampiasaina
Ankehitriny, hiresaka aminao izahay momba ny ohatra amin'ny litera ho an'ny afisy izay azonao eritreretina ho anisan'ireo loharano azonao. Ireo dia:
Io endritsoratra io dia niseho taona maro lasa izay, tamin'ny 1967, ka izany no iheverana azy ankehitriny ho karazana typoire. Tsy mamporisika azy hanao lahatsoratra be dia be izahay, fa hisongadina fotsiny.
Izy io dia tonga lafatra toy ny litera ho an'ny afisy fahitalavitra na hoe tianao ny hanome azy io kanto sy mahafinaritra.
Tamin'ny taona 2019 no iray amin'ireo taratasy malaza indrindra amin'ny afisy, ary amin'ny 2021 dia toa averimberina hatrany io fironana io. Mora tokoa ny mamaky sy misarika ny sainao, hahazoanao roa-ho-iray.
Efa nilaza taminay momba an'i Bodoni izahay indraindray. Taratasy izay misy fampiasa maro, ny iray amin'izany dia ny afisy.
Ny typeface dia kanto, misy kapoka matevina sy manify ary somary maranitra sy azo zahana. Na eo aza ny maha "klasika" azy, ny tena izy dia miasa tsara toy ny litera afisy, ka azonao atao ny mandray izany.
Karazan-tsoratra taloha kokoa noho ilay voalohany natombokay, noforonin'i Paul Renner tamin'ny 1927. Izy io dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao ary ampiasain'ny orinasa lehibe toa an'i Ikea na Opel.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hiala kely amin'ny "linear" isika, satria amin'ity karazana font ity dia manana ny toetranao ianao. Ary misy antsipiriany maromaro izay mampiavaka azy, koa raha tsy be dia be ny lahatsoratrao, ary tianao ho voasambotra ihany koa izany ary ho lasa endrika izy, azonao atao ny misafidy azy.
Mazava ho azy fa tsy mamporisika azy hanao lahatsoratra lehibe izahay.
Ho an'ny tetik'asa fomba cyberpunk dia mety io no iray amin'ireo safidy ampiasaina. Taratasy futuristic mifototra amin'ny astronomia, miaraka amina tetikasa mifandraika amin'ny ho avy, habakabaka sns. afaka tonga lafatra izy ireo.
Amin'ity tranga ity, ity typeface ity dia manome rivotra mandrakotra fonon-boky 70 taona, izay, ho an'ireo afisy antitra, dia mety ho lavorary. Ho an'ny mpihaino tanora sy mavitrika ary, na dia toa mahazatra aza, ny tena izy dia miaraka amin'ireo fiolahana sy endrika boribory mifanentana tsara amin'ireo izay efa anaovana ankehitriny.
Ho an'ny vahoaka tanora kokoa, manana an'ity ianao, mahafatifaty Paper. Izy ireo dia taratasy ho an'ny afisy ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora, na dia haingon-trano aza izy ireo, dia mamaky teny tsara tokoa ary manome fikitika kely kokoa ny hafatra tianao hapetraka.
Taratasy afisy: Tsy azo atao
Karazan-tsoratra iray toa nosoratana tanana dia ity. Izy io dia endritsoratra tena be mpampiasa ary afaka mampiasa azy io tsy ho litera ho an'ny afisy ihany, fa koa amin'ny stationery, logo, marika ...
Misy karazana litera maro hafa ho an'ny afisy, toy ny misy endritsoratra, fa noho izany antony izany dia mila manokana fotoana ianao hahitana ilay mety indrindra amin'ilay tetikasa. Ankehitriny, raha manana karazana sy karazana ianao, dia ho mora aminao kokoa ny hahita ny endrik'izany amin'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Taratasy fanoratana